XOG CUSUB: CCWarsame oo Weerar Afka ah ku qaaday Sheekh Umal, kaddib markii loogu baaqay inuu towbad keeno | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG CUSUB: CCWarsame oo Weerar Afka ah ku qaaday Sheekh Umal, kaddib...
XOG CUSUB: CCWarsame oo Weerar Afka ah ku qaaday Sheekh Umal, kaddib markii loogu baaqay inuu towbad keeno
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame
Muqdisho (Halqaran.com) – Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa wuxuu weerar afka ah ku qaaday Sheekh Maxamed Cabdi Umal, ka dib markii uu Sheekha ugu baaqay in uu Alle u towbad keeno.
Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo wax laga weydiiyay hadalkii doodda badan dhaliyay ee ka soo yeeray Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ku eedeeyay in uu inkiray Xadiis ka sugnaaday Nebiga (NNKH). Waxaa uu sheegay in Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir uu Xadiiska Nebiga u dafiray si uu ugu gaaro mansab siyaasadeed, balse aanu layaabi doonin, maadaama ay horey u arkayn kuwii dalka burburiyay in xilal lagu abaalmariyay
Sheekha ayaa xusay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ammaanay habar gaalnimo ku barbaartay, oo uu ugala jeedo Angela Merkel, Ra’iisal Wasaaraha Jarmalka, waxaana uu ugu baaqay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in uu Alle u towbad keeno.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook uga jawaabay baaqa uga yimid Sheekh Umal, isagoona qoraalkan ku weeraray Sheekh Maxamed Cabdi Umal.
Qoraalka Ina Warsame ayaa u qornaa sidatan:-
Waxaan dhegaystay hadal uu Maxamad Cabdi Umal kaga falceliyey khudbad aan horay u jeediyey. Hadalka Umal wuxuu ku soo beegay caawa fiidkii, ka dib maanta duhurkii oo aan dadwaynaha Soomaaliyeed u caddeeyay ugana cudurdaartay wixii khalad ah ee hadalkaygii hore ku jiray. Waxaanse la yaabay in Umal uu si ula kac ah oo shakhsi ah ii lafa gaaray.
Wuxuu igu tilmaamay: “Jaahil, eey oo kala ah, gaalo raac, Nebi diid ah, Diinta ka xuubsiibtay, dumarka cod si khiyaano ah uga raadsanaya.”
Wuxuu Umal shacabka Soomaaliyeed ku eedeyey in ay raggii soo qixiyay xukunka ku abaal mariyeen, oo ay madax ka dhigteen. Waxaa uu kaloo sheegay in kuwo aan anigu ka mid ahay ee soo socdana ay gaalo raac yihiin.
Umal wuxuu ka gaabsaday gabood falka iyo xadgudub ka madaxda haatan talada dalka haysa. Wuxuusan juuq ka oran dhiibistii Qalbidhagax, xasuuqii Baydhabo, cunaqabataynta shacabka Kismaayo, iyo weerarkii wiilasha ilaalada ii ahaa ee xarunta Xisbigayga lagu xasuuqay.
U hiilinta Diinta ka mid maaha miyaa ilaalinta dhiiga Muslinka, dhowrista sharafkiisa iyo xuquuqdiisa?
Lama yaabbani Sheekh Umal, sababta oo ah, waa ninkii na gaalaysiiyey markii aan heshiiskii Jabuuti galnay; waa ninkii gaalaysiiyey C/laahi Yuusuf; waa ninka Dawladdii Xasan Sheekh irdaha u taagnaa. Isaga iyo Xasan Daahir waxaa ay ilaalashadaan dawladda uu Farmaajo hoggaamiyo, sababtuna waa ay caddahay. Waa in Fahad Yaasiin oo ah madaxa xafiiska siyaasadda ee Xarakada Ictisaam oo ay soo wada galeen dagaalkii Araare, Gedo iyo Boosaaso uu dawladdaan milkiile ka yahay. Waxaa dhaqan u ah gaalaysiinta Muslimka, banaynta dhiigiisa iyo ku xadgudubka cirdigiisa.
Hadal jeedinta Umal diin difaac ma ahayn, sababtoo ah ima daba taagnaadeen anigoo wax kasta cadeeyey, waqtiga intiisa badana wuxuu ku bixiyey in uu dadka iibiyo in aanan cod la i siinin. Inta kale Xasan Daahir ayuu kala mid ahaa, laakiin wuxuu kaga duwanaa in uu olole siyaasadeed oo ba’an ku jiray, laakiin waxaan ku kalsoonahay intii dhagaysataa oo caqli, cilmi iyo garasho leh in ay fahmi doonaan halka qasadkiisu yahay iyo hawsha uu Umal heeganka ugu jiro.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir CCWarsame oo weerar afka ku qaaday Sheekh Umal